Kiis noociisa horey loo arag - caruur lagu kufsaday qadka internetka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kiis noociisa horey loo arag - caruur lagu kufsaday qadka internetka
La daabacay torsdag 14 januari 2016 kl 14.42
"Kufsiga internetka lagu geystay boqolaal dhalaan ah"
Kiis kufsioo noociisa kii ugu horeyey ah ayaa dacwadiisa maanta ka bilaabantay maxkamaddahose ee Atunda Tingrätt degmada Sollentuna waqooyiga Stockholm. Dacwadda kiiskanayaa la xiriirta kufsi iyo ka faa’ideyso galmo gabdho da’yar oo boqolaal kor udhaafaya.
Kiiskan ayaa noocesa horey maxkamadda Sweden loogu tijaabin, waana markii ugu horeysey oo maxkmadda tijaabineyso in kufsi caruur lagu geysan karo qadka internetka.
Sidoo kale waxaa kiiskan ka dhigayo mid goonidiisa ah dhibanayaasha boqolalka ah ee aadka u da’yar, kan ugu da’yarna yahay shan sanno jir.
Tomas Mattsson waa xeer’illaaliyaha gacanta ku haya kiiskan.
– Kiiskan waxuu ku saabsanyahay boqolaal dhalaan ah oo da’dooda u dhaxeyso shan jir illa 14 jir oo nin ku waxleeyey internteka isaga oo adeegsanaya app-ka KIK. Halkas ayuu ninkan caruurta ugu geystay faroxumeyn galmo, asagoo ka dhaadhaciyey in ay sawiro qaawanaasho ah u soo diraan.
– Sidoo kale waxuu ka dhaadhaciyey in waxyaalo galmo ayaga isku sameeyaan, ayuu yeri Tomas Mattsson.
Eedeysanaha ayaa ah 20 sanno jir aan horey cinqaab ah ugu dhacin. Markuu caruurta xiriirka kula sameyanyey internetka ayuu hadba waxuu iska dhigayey ilmaha da’da ay yahiin. Eedeysanaha ayaa qaybo ka mid ah eedeymaha aqbalay laakiin waxuu inkiray sida dacwado loo dhigay ee ah in caruurta uu kufsaday.
Xeer’illiyaha Tomas Mattson ayaa sharaxay sabsabta uu ku doortay eedeysanaha in uu dacwad kufsi ku soo ogo isaga uusan eedeysanaha marna la kulmin caruurta balse xiriir kula sameeyey keliya qadka internetka.
– Waxay ku sabsan tahay, go’aan maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda dhexe ee Svea hovrätt oo oranaya haddii dhibanaha kufsi iyo faroxumey isga iskugeysto markas eedeysanaha waxaa lagu xukumayaan in uu kufsi geystay, ayuu yeri.
– Waagii hore waxaa qasab aheyn in eedeysanaha asaga kufuliyo falka kufsiga dhibanaha si markas falkas u noqdo fal kufsi halka hada ay kufsi noqoneyso haddii laga dhaadhaciyo ilmaha in uu asaga isku sameeyey xadgudub galmo, ayuu yeri xeer-illaaliye sare Tomas Mattson.